Wildebeest - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
Sisilwanyana sasendle. Umzimba umnyama na ngwevu uphawulwe ngamagqabi amnyama angaphambili. Isibhakabhaka sibonakaliswa ngumntu omnyama omnyama kunye neendube zeenwele ezixhoma emqaleni. Zezini zesini zikhula iimpondo ezifutshane. Kwiinkomo eziziintloko izimpondo zixhaphake kakhulu.
Iibhokhwe zilinganisa iikhilo eziyi-250 kunye nemiqathango eyi-1.5 m emagxeni. Iinkomo ezincinci, zilinganisa ii-1.4 m emagxeni kunye nobukhulu obuyi-180 kg.
I-Blue Wildebeest ngabalimi bonyaka. Ukuzalwa kwamathole athobileyo nganye kwenkomo emva kwexesha lokubanjwa kweenyanga ezilithoba. Amathole angahamba kunye neenkomo emva kwemizuzu emva kokuzalwa.
Ukujonga kwimihlambi yeenkomo. Ukufuduka kwamanye amazwe kwakuyiqhinga lokuphila elifanelekileyo eliye lavumela ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kwezixhobo kwiindawo ezinkulu kunye nokucutha ukusetyenziswa kwexesha, zombini ngexesha elimanzi nelomileyo.
Olu luhlobo lwe-brebiary herbivore, oluvela emhlambini oluvela kwi-10 ukuya kumawaka ambalwa abantu. Iibhokhwe zigcina indawo xa umhlambi uhlala khona.
Imephu yemimandla abayifumaneka kakhulu kwiNdawo yokuHlalwa kweMali iya kugxila kwimimandla ekumntla-mpuma eMzantsi Afrika. Ayithathwa njengengozi, kodwa ininzi lifumaneka kwimimandla yolondolozo. Kwa sasazwa ngokubanzi kumazwe angasenyakatho eMzantsi Afrika. Inani labantu liyacuthwa kakhulu ngenxa yocingo, oluvimba ukufudukela kwendalo kunye nemvelo.